तपाईले अनुभव गरेको उमेर जन्ममितिसँग किन मिल्दैन ? यस्तो छ कारण - Dainik Nepal
तपाईले अनुभव गरेको उमेर जन्ममितिसँग किन मिल्दैन ? यस्तो छ कारण
दैनिक नेपाल २०७५ साउन ६ गते १४:०६
काठमाडौँ । एक छिन कल्पना गरौं, तपाईको जन्मदर्ता पत्र छैन र तपाईको उमेर तपाईले कल्पना गरेको उमेरमा आधारित रहनेछ । यस्तो अवस्थामा तपाई आफ्नो उमेर कति भन्न चाहानुहुन्छ ?
जस्तैः तपाईको उचाई, तपाईको खुट्टाको आकार र तपाईले हाल सम्म बिताउनुभएका वर्षहरु परिवर्तन गर्न नसिकने तथ्य हुन् । तर, हरेकको अनुभवले भन्छ कि हामी हाम्रो वास्तविक उमेर अनुसारको आफ्नो उमेर सोचिरहेका हुँदैनौं ।
कसैले आफूलाई आफ्नो वास्तविक उमेर भन्दा बढि सोच्छन् भने कसैले आफ्नो उमेर भन्दा जवान भएको सम्झिन्छन् । हामीमा यस्तो किन हुन्छ ?
यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरु खुब ईच्छापूर्वक लागेका छन् । उनीहरुले कुनै मानिस आफू जवान देखिन चाहेका कारण पनि ‘मानसिक उमेर’मा फरक पर्ने गरेको र कोहि पाको देखिन चाहेकाले यस्तो हुने गरेको सुझाउँछन् ।
वर्जिनिया विश्वविद्यालयका ब्रायन नोस्को भन्छन्, ‘जवानहरु बच्चै देखिन चाहानु उनीहरुले दैनिक जीवनमा के गरिरहेका छन् र भविष्यमा के गर्न चाहान्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ ।’
खासमा यसको महत्व र वास्तविकता यत्तिकैमा सकिँदैन । कयौं अध्ययनहरुका नतिजाहरुले मानिसहरुले अनुभव गर्न मानसिक उमेरका आधारमा विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परिणामहरूको भविष्यवाणी गर्न सकिने कुरा देखाएका छन् । यसबाट मानिसको मृत्युको जोखिम पनि पत्ता लगाउने र उनीहरु कति बाँच्दछन् भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सकिने अध्ययनहरुको ठम्याई छ ।
शोधकर्ताहरू अब उमेरको व्यक्तिगत अनुभवको आकारमा धेरै जैविक, मनोवैज्ञानिक, र सामाजिक कारकहरू हटाउन प्रयास गर्दैछन् । उनीहरु कसरी मानिसहरु स्वस्थ भई लामो आयु बाँच्न सक्छन् भन्ने विषयमा खोज गर्दै छन् ।
सुरुवाती चरणमा परम्परागत धारणाको खोजीमा सोधकर्ताहरु रहेपनि वर्तमान अवस्थामा भने उनीहरुको खोजको विषय निकै परिवर्तन भएको छ । सोधकर्ताहरु यतिवेला सम्भावित मानसिक र भौतिक परिणामहरुको खोजीमा लागेका छन् ।
एउटा खोजको रोचक निष्कर्षले हाम्रो मानसिक आयु हाम्रै व्यक्तित्वमा भर पर्ने बताएको छ । यो तथ्य स्वीकार योग्य रहेको पनि वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
मन्टपेलीयर विश्वविद्यालयका यानिक स्टेफनले तीन दीर्घकालीन अध्ययनका तथ्याङ्कहरूको जाँच गरेका थिए । जसमा अधबैंसे भन्दा बढि उमेरका १७ हजार भन्दा बढि सहभागी भएका थिए ।
ती मध्य धेरैले आफ्नो वास्तविक उमेर भन्दा औषतमा ८ वर्ष जवान महसुस गरेका थिए भने अन्यले आफ्नै उमेरको महसुस गरेको बताएका थिए । तर परिणाम भने गम्भिर रहेको स्टेफनले बताए ।
जुन मानिसहरु आफूलाई ८ देखि १३ वर्ष बढी उमेरको अनुभव गर्थे उनीहरुमा अध्ययन अवधिभर १८ देखि २५ प्रतिशत बढी मृत्युको खतरा देखियो । त्यस्ता मानिसहरुमा रोगहरु लाग्ने खतरा पनि उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सो अध्ययनमा जनसांख्यिकीय कारकहरू जस्तै शिक्षा, दौड वा वैवाहिक अवस्थाको असर हटाईएको थियो ।
आफ्नो वास्तविक उमेर भन्दा जवान सम्झिनेहरुमा डिप्रेसन हुने सम्भावना कम रहने र मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ रहने सोधकर्ताहरुको सुझाव छ । यसर्थ त्यस्ता व्यक्ति शारीरिक रुपमा पनि स्वस्थ रहने र सानो सानो रोग लागेर अस्पताल गईरहनुपर्ने समस्या पनि कम हुने उनीहरुको दाबी छ ।